Budata MindFine APK maka Android
MindFine bụ egwuregwu nka emepụtara maka ekwentị gam akporo na mbadamba.
Onye nrụpụta egwuregwu Turkey Vav Game mere, MindFine na-anwale usoro anyị ahụbeghị mbụ. Nezie, enwere egwuregwu anọ dị iche iche na MindFine. Egwuregwu ndị a, naka nke ọzọ, na-apụta na ụzọ abụọ mgbe ọ bụla. Nikwu ya nụzọ ọzọ, a na-ekewa ihuenyo ụzọ abụọ ma enwere egwuregwu notu akụkụ na egwuregwu ọzọ nakụkụ nke ọzọ. Onye ọkpụkpọ ahụ na-agbalị ịchịkwa egwuregwu ahụ na ihuenyo abụọ site na iji aka abụọ.
Ọ bụ nezie mara mma dị mfe na anọ dị iche iche egwuregwu. Mana nihi na anyị na-agbalị ijikwa egwuregwu abụọ notu oge, ọ na-enwekarị oge ụbụrụ anyị na-ada. Nihi nke a, egwuregwu na-ewetara anyị ihe ịma aka dị iche mgbe ọ bụla. Na mgbakwunye, ka oge egwuregwu na-abawanye, ihe isi ike ndị ị ga-emeri na-abawanye mgbe niile.
Mmepụta: Vav Game